Madaxweynaha Koofur galbeed oo kulan la qaatay bulshada magaalada Baraawe – Banaadir Times
By banaadir 4th November 2019 137
Madaxweynaha maamulka Koofur galbeed C/casiis Xasan Maxamed (lafta-gareen) ayaa xalay kulan kula yeeshay magaalada Baraawe ee Gobolka Shabeellaha hoose qeybaha kala duwan ee bulshada, waxaana uu kala hadlay sidii ay uga qeyb qaadan lahaayeen sugida amniga iyo la shaqeeynta hay’adaha ammaanka.
Madaxweynaha ayaa shacabka ku nool degmada Baraawe ku ammaanay sida wanaagsan ee ay ula shaqeeyaan Ciidamada qalabka sida ee har iyo habeen u taagan sidii ay u badbaadi lahaayeen Shacabka Soomaaliyeed,isagoo ka codsaday iney sii kordhiyaan dadaalkooda.
Dhanka kale Madaxweynaha koofur galbeed ayaa Saraakiisha ammaanka kala hadlay sidii maleeshiyada Al-shabaab looga xureyn lahaa deegaannada ay kaga suganyihiin maamulka Koofur galbeed, si looga dulqaado dhibaatada ay ku hayaan dadka shacabka ah.
Madaxweynaha iyo wafdi uu hogaaminayay ayaa shalay gaaray magaalada Baraawe ee xarunta maamulka koofur galbeed si ay usoo indha indheeyaan xaalada guud ee magaalada iyo sida adeegyada bulshada ay u shaqeeyaan.
Ra’iisul Wasaare Kheyre oo kormeer ku tagay Garoonka Balli-doogle (Sawirro)
By banaadir 1st March 2020